Chii chinonzi LLLP - Yakatemerwa Dhizaina Kudyidzana Kudyidzana
Chii chinonzi LLLP?
LLLP ndeyeKushoma Liability Yakabatana Kudyidzana. Heano maviri mabhenefiti makuru echinhu ichi. Kutanga, inodzivirira vadyidzani kubva mukuremerwa kana iko kudyidzana kukafumurwa kumatare. Chechipiri, inopa kuchengetedzwa kwemidziyo. Ndokunge, kana mumwe munhu akamhan'arira mumwe wake, pachezvake, zvinodzivirira midziyo iri mukati memubatanidzwa kubva mukutorwa nemutongi anotonga mukwikwidzi. Saka, kunyangwe mhosva yacho ichibva mukati mekambani kana yakanamatira mumwe wako, iyo LLLP inogona kupa chipingamupinyi chepamutemo.
Mhando iyi yemubatanidzwa inopawo mutoro wakaringana kune vese vadyidzani veiyo isinganetsi dhizimusi kudyidzana. Izvi hazvifanane nehukama hushoma, apo vese vanobatana vane mutoro wezvese zvisungo zvekudyidzana. Yakatemerwa Partnership mutemo uye yakaganhurwa kudyidzana chibvumirano inoramba ichishanda. Iyo yakarebesa midziyo yekudzivirira nyaya nhoroondo nhoroondo yakapihwa neyakaganhurana kudyidzana inoshandiswa kupa rutsigiro kuchengetedzwa kwemidziyo inowanikwa mumutemo wechinhu ichi.
Kugadzira Yakatemerwa Mutoro Yakatemerwa Kudyidzana
Mune matunhu mazhinji Kudyidzana Kudyidzana kunogona kunyoresa seKushoma Liability Yakabatana Kudyidzana. Iko kudyidzana kushoma kunogona kuve kushomeka kushoma kudyidzana nevhoti uye kugadzirisa kune iko kudyidzana. Mumatunhu mazhinji kudyidzana kucharamba kuchingoita sesangano repamutemo rakavapo kare.
Sekunyora uku, iyo Yakatemerwa Mutoro Yakabatana Kudyidzana kunozivikanwa mumatunhu anotevera:
Dzimwe nyika zhinji dzave kutanga kuziva iyo Yakatemerwa Mutoro Yakatemerwa Kudyidzana. Kunyangwe California isina mutemo wenyika unobvumidza kuumbwa kweCalifornia LLLP, inoziva maLLLPs akaumbwa pasi pemitemo yeimwe nyika.
General Partner vane chikwereti chakaganhurirwa chakafanana neyavagovani vesangano. Hazvichinje mabhenefiti eiyo kudyidzana senge yemubatanidzwa mutero iyo isingawanikwe kune iye anosanganisira. Inoderedza mukana wekukanganisa wemumwe mudiwa.
Yakatemerwa Kudyidzana asset dziviriro mutemo unoratidza yakawandisa nhoroondo ye "kesi mutemo" inoratidza kuti iyo LP inopa kuchengetedzwa kwemidziyo kana varidzi veLP vakamhan'arwa. Zvisinei, iyo LP ine "vanotambura" zviri pamutemo. Kana iro bhizinesi rakamhan'arwa ino sangano inotakura nhare yakasimba yekuchengetedza midziyo inowanikwa mumitemo yeLP uye zvakare iine mukana wekupa chengetedzo yemutoro kune iye akabata chinzvimbo che "general partner" akamiririra LLLP.
Kugadzira LLLP zvakada kufanana nekubatanidza. Zvinyorwa zvakakosha zvinoiswa kuhurumende yenyika. Magumo emutemo anotevera: Yakatemerwa Mutoro Yakatemerwa Kudyidzana, LLLP, kana LLLP
Ruzivo rwunoratidzwa pawebhusaiti ino rwakagadzirirwa kupa ruzivo rwakakwana uye rwechiremera ruzivo rwakakosha uye rutsigiro rwekutsvagisa maererano nenyaya iri kutaurwa Inounzwa nekunzwisisa kuti Makambani Akabatanidzwa haana kuita mukupa zviri pamutemo, accounting, kana rimwe zano rehunyanzvi. Kana zano repamutemo kana rumwe rubatsiro rwehunyanzvi ruchidikanwa, masevhisi emunhu ane hunyanzvi anofanirwa kutsvaga.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaKurume 16, 2018